Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vilanin-tsolika voajanahary | Fanavaozana maintso
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vilany entona voajanahary
Any amin'ny trano maro, ny boiler dia ampiasaina hanafanana rano mba hampiasaina amin'ny fandroana na lakozia. Zava-dehibe ny fahalalana izay boiler mahomby kokoa raha te-hihary amin'ny faktioran-jiro isika ary hampiasa ny ankamaroan'ny loharanon-karena ananantsika. Androany isika dia hiresaka momba ny vilanin-tsolika voajanahary.
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mianatra ny zava-drehetra mifandraika amin'ity karazana boiler ity ianao. Avy amin'ny zavatra misy azy ireo sy ny fomba fiasan'izy ireo ka iza amin'ireo no tena tokony hampiasaina, mandalo ny tombony sy ny fatiantoka entin'ny tsirairay. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
1 Inona avy ireo vilanin-tsolika voajanahary?
3 Karazana vinaingitra entona voajanahary
3.1 Vovon-tsolika misy rano
3.2 Vovon-tsolika ambany NOx
3.3 Fanamafisana ny vovo-gazy
3.4 Kitapom-bary entona
5 Tombontsoa ho an'ny vilany entona
Inona avy ireo vilanin-tsolika voajanahary?
Ny vilanin-tsolika voajanahary dia kaontenera iray misy ny rano hafanaina izay ny solika dia entona voajanahary.
Isika rehetra dia te-hihary be indrindra amin'ny paosintsika amin'ny olan'ny tokantrano mba hahafahantsika mandany izany amin'ny dia, na filana na zavatra tiantsika rehetra. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo ampidirintsika fanoloran-tena amin'ny fanjakan'ny tontolo iainana. Ny vinaingitra, toy ny fitaovana hafa ao an-trano, dia tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika, satria miaraka amin'izy ireo isika no manafana ny rano ampiasantsika.
Ny fisafidianana modely tsara na tsia dia miankina tanteraka amin'ny fahalalana azo ampiharina izay boiler no tsara indrindra amin'ny toe-javatra iainantsika. Zava-dehibe ny fahalalana izay boiler hofidintsika miankina amin'ny ny maodely, ny fikojakojana ilainy, ny fanitsiana ary ny fahombiazany. Raha afaka misafidy izay mety indrindra amintsika isika dia afaka manangona vola be amin'ny faran'ny volana. Ho fanampin'izay dia tsy maintsy raisina ihany koa fa, arakaraka ny maha avo ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny boiler dia tsy dia manimba ny tontolo iainana isika amin'ny fandotoana ny loto.
Ireo boiler dia manana burner izay tompon'andraikitra amin'ny fanombohana ny fandoroana entona. Entona voajanahary io gazy io, na dia misy koa aza ny boera izay propane na diesel ny famatsiana solika. Rehefa hafanaina ny etona dia avadika ho etona ilay rano ao anaty tanky ary mivoaka amin'ny alàlan'ny boriborintany mba hanafanana ny trano sisa. Ity etona rano ity dia azo ampiasaina hampifandraisana azy ireo amin'ny radiatera na koa amin'ny fanafanana ambanin'ny tany.
Mila vinaingitra propane tanky hafa hitahiry ny lasantsy, noho izany dia manana toerana malalaka kokoa noho ny tianay hatokana ho an'ity karazana fitaovana ity izahay. Ny diesel dia mora vidy kokoa ary mamela antsika handro ihany koa. Ho fanampin'izay dia mila fivoahana ho an'ireo gazy ateraky ny fandoroana izany, ka mila fametrahana bebe kokoa koa izy ireo.
Ireo filàna rehetra ireo dia mahatonga ny fametrahana boiler toy izany handany fotoana bebe kokoa ary amin'ny farany lafo kokoa. Noho io antony io dia ny vilanin-tsolika voajanahary no azo antoka sy azo ampiharina indrindra. Ny hevitry ny entona voajanahary dia miely tokoa ary be mpampiasa ka fantatra amin'ny hoe Tanànan'ny gazy.
Karazana vinaingitra entona voajanahary
Misy karazan-bozaka entona voajanahary isan-karazany ary, araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia tsy maintsy fantarintsika tsara hoe iza amin'izy ireo no hisafidy ny hanatsara ny harenantsika raha ny marina, manangona vola.
Vovon-tsolika misy rano
Ireo boiler ireo dia manana efitrano fandoroana voaisy tombo-kase ary aza mandany rivotra avy ao anaty trano. Io fivoarana io no mahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa, satria ny entona vokarina mandritra ny fandoroana dia tsy mifandray amin'ny rivotra iainantsika.
Vovon-tsolika ambany NOx
Ny azota azota dia fandotoana mandoto izay azo mandritra ny dingan'ny fandoroana amin'ny oxygen be loatra. Ny vilia izay tsy manana karazana fehezan-dalàna momba ny emission dia mandoto kokoa ary tsy mahomby. Ity karazana boiler ity dia manana endrika mitovy amin'ilay teo aloha saingy vonona ny hamoaka oksida azota kely izy.
Fanamafisana ny vovo-gazy
Izy ireo koa dia mitazona ny maodely ho tery, fa manana tombony amin'ny famerenana miverimberina ny herin'ny etona rano. Izany hoe manana faribolana izy ireo mamindra ny etona rano ampiasaina ny, kosa, manampy amin'ny fanafanana ny rano sisa ao anaty tank. Io dia mampihena ny vidin'ny angovo ampiasaina amin'ny fanafanana ny rano, satria manararaotra ny hafanana sisa tavela amin'ny setroka vokarina.
Izy ireo koa dia azo antoka sy mahomby kokoa ary afaka manangona vola be amin'ny fanjifana gazy voajanahary isika.
Amin'ity maodelim-boiler ity, tsy toy ny teo aloha, misokatra ny efitrano fandoroana ary ny rivotra ampiasaina hanafanana ny rano dia nangonina avy amin'ny toerana misy ny vilany. Ireo boiler ireo dia mandoto bebe kokoa ary tsy dia mahomby sy azo antoka. Ankoatr'izay dia mamindra etona manimba ao an-tranonay izy ireo.
Ny miresaka momba ny vidiny ankapobeny dia somary sarotra, satria misy maodely an'arivony isan-karazany. Na izany aza, ny vovon-drivotra (na dia ireo kely indrindra atolotra azy ireo aza) no mora indrindra. Manodidina ny 300 euro ny vidiny. Kalitao ambany, vidiny ambany. Saingy tsy izany, tokony hisafidy ireo isika. Handoto bebe kokoa isika ary handany solika bebe kokoa amin'ny fotoana maharitra satria ambany ny fahombiazany.
Etsy ankilany, ny vata fantsona tsy misy rano dia misy vidiny miova eo anelanelan'ny 400 sy 1400 euro. Manana vidiny lafo lavitra kokoa izy ireo, saingy ny tsy fandotoana sy ny fahombiazana kokoa, amin'ny hoavy, dia hidika ho kely ny fanjifana solika ary, noho izany, kely ny vidiny.
Tombontsoa ho an'ny vilany entona
Ny fampiasana vovo-tsolika dia misy tombony ary ireto avy ireto:
Ny vidiny dia mazàna mora (avy amin'ny 300 euro). Azo atao ao an-trano izany.
Ny vokany amin'ny fanafanana rano haingana sy mahazo aina izy io. Ankoatr'izay, satria manana thermostat sy counter, dia azo alamina hamindroana ny hafanana tadiavintsika.
Matetika izy ireo dia tsy mandray toerana be dia be ary manana androm-piainana nandritra ny taona maro.
Tsy mila fanadiovana izany raha oharina amin'ny fitaovana fanamafisana hafa ary tsy mamoaka tabataba izy io.
Farany, ilaina koa ny manonona ny fatiantoka an'ity karazana boiler ity. Ny fatiantoka hita fotsiny dia ny fikojakojana azy. Tsy maintsy diovina indray mandeha isan-taona izy ireo hialana amin'ny fahasimbana sy ny fitohanan'ny olona ary indrindra hanakanana ny lozam-pifamoivoizana.
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny misafidy karazana boiler sahaza anao indrindra ary tehirizo faran'izay betsaka amin'ny hafanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vilany entona voajanahary
Mahafantatra ny minisiteran'ny tontolo iainana sy ny drafitra ny habaka
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fatana pellet